Ukucindezeleka Kwezingulube Kokubanda
Ngenxa yezimo zasezulu zaseNingizimu Afrika ezifudumayo, ukucindezeleka okubandayo akuyona inkinga enkulu ngezingulube ezindala njengamanye amazwe apholile. Nokho, ubusika, nobusuku obubusika obuningi obusika, bungaba nzima kakhulu kwezinye izingxenye zezwe, ngakho-ke abalimi kulezi zindawo kudingeka bathathe izinyathelo zokuqapha izinkukhu zabo ngezikhathi ezinjalo.
Ama-pigs asengozini ikakhulukazi ekucindezelekeni okubandayo kusukela, ngokungafani nama-piglets abadala, anamafutha omzimba kakhulu okuwavikela emakhazeni, ikakhulukazi phakathi kwamahora angamashumi amane nesishiyagalolunye ngemuva kokuzalwa. Ngeke ziphumelele futhi cishe ziphele zifile uma zingagcinwa zifudumele.
Njengezinkukhu ezikhulile, ukuhluleka ukugcina izingulube zifudumala kuzoholela ekutheni amandla avela ekudleni kwabo asetshenziselwa isizukulwane sokushisa esikhundleni sokukhula. Uyazi kanjani ukuthi izingulube zakho zibhekene nokucindezeleka okubandayo?
Ngokusho kwe-Animal Agriculture eWashington State University, izingulube ezibhekene nokucindezeleka okubandayo ziyohlangana ndawonye noma zilale ngezinyawo zazo zibe ngaphansi kwazo ngenhloso yokufudumala. Bangase futhi badonsa emakhazeni. Uma ukucindezeleka okubandayo kuqhubeka isikhathi esingaphezu kwezinsuku ezimbalwa, izingulube zizothola isikhumba, zikhule kahle futhi zihlakulele izingubo ezinzima zezinwele. Bangase babe nezinkinga zokuhuda.
Ukunikeza amazinga okushisa okunethezeka ngenkathi i-farrowing ishiwo kalula kunokuthi kwenziwe, ngoba utshani nezinhlanzi zikhula emazingeni ahlukene okushisa. Ngokuvamile izinhlanzi zikhululekile kakhulu ngo-16 kuya ku-25 degrees celsius, kuyilapho izingulube ziyokhula emazingeni okushisa eziphakeme ngamaphesenti angu-32 celsius. Izitshalo ezishisa kakhulu zizoqala ukudla okuncane futhi zikhiqize nobisi obuncane, okuzobe nomthelela omubi ekukhuleni kwezingulube. Kodwa-ke, izingulube zidinga ukuhlala zifudumele ukuze zikhule kahle.
Ezikhathini zanamuhla, izinga lokushisa lokushisa lizoshintshaniswa nezidingo zabahlwanyelayo, kanti ukushisa okungeziwe noma okushisa kusetshenziswa ukugcina izingulube zifudumele. Ukuze uthole ngokunemba, kubalulekile ukuthatha izinga lokushisa ekamelweni elifanayo kanye nezinyawo ezimbalwa endaweni lapho kugcinwa khona izingulube.
Iphansi iphinde isetshenziswe ngokuyisisekelo ukuxazulula le nkinga, ngokuhlwanyela ngokuvamile elele phansi eyenziwe ngezinto ezipholile kunendawo lapho izingulube zigcinwa khona. Izansi zingenziwa kusuka ezintweni ezisuka enkuni kuya kokhonkolo, insimbi, ipulasitiki, i-fiberglass, insimbi yensimbi ne-aluminium.
Ukusebenzisa umbhede, njengobuntshani noma izinkuni zomuthi, emhlabathini ophansi lapho izingulube zigcinwa khona, ngeke nje kusize ukuphakamisa izinga lokushisa lapho kugcinwa khona izingulube kodwa futhi kuzosiza ukuba zihlale zikhululekile. Nokho, ukulala kufanele kube khona noma ukulala okusha kuhlanganiswe ukugcina izingulube zomile futhi zihlanzekile.
Indawo zokugcina izingulube kufanelezifudumale kahle, kusukela phansi kuya nasezindongeni ukuvimbela ukubanda. Abanye abalimi basebenzisa amakhethini epulasitiki ukuvala amafasitela ngesikhathi sezulu esibanda futhi esibi.